बिग्रँदै गएको हाम्रो सम्बन्ध, जहाँ आफ्नालाई नै बिस बन्छ - kageshworikhabar.com
माटोलाई डुङ्गाको साथ भने झैँ, हामीहरुलाई पनि विभिन्न नाता भनौं या त सम्बन्धको साथ सदैव रहिरहन्छ । हामी एक परिवार, जो सम्बन्धको नाममा एकअर्कासंग जोडिएका हुन्छौं । जहाँ हरेक सम्बन्धमा एक किसिमको माया लुकेर रहेको हुन्छ, जसलाई हामी प्रकट गर्न सक्दैनौं ।
आधुनिकताको बढ्दो युगसंगै हाम्रा सम्बन्धहरुमा पनि कलि लागिसकेको छ । जहाँ हाम्रा पू्र्खाहरु पारिवारिक सम्बन्ध बचाउनका निम्ति आफ्नो ज्यान समेत दाउमा राख्थे भने यहाँ अहिले हामीलाई चारैतिर झुटा सम्बन्ध निभाउन भ्याइनभ्याई छ।
कामको चापसंगै संधै ब्यस्त रहने हाम्रो दैनिकी अब यो परिवार शब्दसंग पनि रिस गर्न थलेको छ । मानौँ, हामीलाई कसैले हाम्रो घाटीमा पासो अल्झाए झैँ भएको छ। माया र सम्मानमा टिक्ने सम्बन्ध अहिले बाध्यतामा टिक्ने गरेको छ ।
मानिसलाई रिस उठ्नु स्वभाविक नै मानिन्छ । हरेक व्यक्तिलाई रिस उठ्छ, फरक यत्ति छ कि कसैलाई धेरै उठ्छ त कसैलाई थोरै काल्पनिक दुनियाँमा संधै मग्न हुने हामी आफन्तहरुलाई एउटा बोझको रुपमा लिने गर्छौं । ” काम लाग्दा आउ आउ, नभए जाउ जाउ ।”
हामी देख्ने गर्छौं कतिपय मानिसहरू आफ्ना साथीहरूसंग घुम्न जाने, रमाईलो गर्ने या आफ्ना सुखदुःख हरेक कुराहरू बाढ्ने गर्छन् । तर उनीहरुलाई याद हुँदैन कि उनीहरुको पनि आफ्नो परिवार छ । आमा, बाबा, दाजुभाई, दिदिबहिनी छन् । बस् आफ्नो संसारमा रमाउँछन् ।
साथीहरूका लागि जति पनि समय निकाल्ने उ आफ्नो परिवारको लागि एक कल फोन गर्ने समेत समय हुँदैन । कति व्यस्त छ जीवन जहाँ आफ्नालाई समय निकाल्न मरे झैँ गर्छन् भने फेरि उता अरुका लागि भने प्रशस्त समय निकाल्छन् ।
बिचरा बाबा उस्को स्वोर सुन्न नपाउदा छट्पटाउछन् भने उतातिर आमाको भोक व्यास सबै हराउँछ । तपाईंको जीवन त्यत्ति धेरै व्यस्त पनि नबनाउनुहोस् जहाँ तपाईंको सम्बन्ध आफ्नाहरुलाई बिस झैँ बनोस् ।
साथीहरूका साना साना कुरामा खुशी हुने उ, आमाका कुरा उसलाई झर्को लाग्छ । साथीको दु:खमा दुखी हुने उ, बाबाको दु:खमा लाज मान्छ । साथीले गरेका हरेक गफ उसलाई रमाईलो लाग्छ तर यता त्यस्तै गफ आफ्नो दिदिबहिनी या त दाजुभाईले गरे भने दिक्क मान्छ ।
सबै भन्छन्, ” यो कलि हो नानी, यहाँ अमृत दिएनी बिस हुन्छ ।” अनि म सोच्न थाल्दछु कि के साच्चै नै कलिले नै छोएको हो त हाम्रो सम्बन्धलाई पनि ? के यति कमजोर रहेछन् त हाम्रा सम्बन्धहरु ?
युगमा मात्र हैन हाम्रो सम्बन्धमा पनि कलिले वास गर्दैछ । यति निर्दयी पनि नबन्नुहोस् र यति व्यस्त पनि नबन्नुहोस् । जति बेला आफ्नालाइ तपाईंको समयको खाचो हुन्छ, उहाँहरुलाई समय दिनुहोस् । आफ्नाहरुबिच पनि रमाउन सिक्नुहोस्, बाध्यतामा हैन माया र सम्मानका साथ सम्बन्ध निभाउन सिक्नुहोस् ।
Previous articleआज वैशाख १७ गते शुक्रबार, कस्तो छ तपाईंको राशिफल ?
Next articleब्राजिलले कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप आफै बनाउन सुरु